खड्कासँग किन डराए पौडेल, निधि र सिटौला ? – Etajakhabar
खड्कासँग किन डराए पौडेल, निधि र सिटौला ?
काठमाडौं, २२ भदौ । नेताहरूको स्वार्थका कारण नेपाली कांग्रेसले मनोनय दर्ता गर्नु एक दिन पहिला उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेर फेरि आलोचना खेप्न पुगेको छ । उम्मेदवारहरूलाई मन फुकाएर प्रचार प्रसार गर्ने मौका नमिलेको गुनासो आउन थालेका छन् ।
तर, खड्कासँग डराएका पौडेल, निधि र सिटौलाले भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बनाउने कानून पारित हुन लाग्यो भनेर एमाले र माओवादीका सांसदमार्फत समाचार बाहिर पु-याएका थिए । सिङ्गो कांग्रेस र संसद नै नेता खड्काविरुद्ध लागेको चर्चा हुन थालेको छ । खड्कासँग केही क्षमता छ भन्ने कुरा निर्वाचन विधेयक पारित गर्ने बेलाकोखड्कासँग किन डराए पौडेल, निधि र सिटौला ? अवस्था देखेर एमालेका नेताहरूले समेत जिब्रो टोकेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २२, २०७४ समय: ७:१८:५२